HTC U12 Life ၏ထိုင်ဝမ်အလယ်ပိုင်းအကွာအဝေး | Androidsis
ဇွန်လကုန်မှာ HTC U12 Life ၏အရည်အသွေးများကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်အငြင်းပွားဖွယ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်းထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီကသူတို့၏ veracity ကိုအတည်မပြုရသေးသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။ အသစ်ကမကြာသေးမီကဖြန့်ချိဆပ်.
HTC U12 Life ၏ဤပုံရိပ်ကထုတ်ကုန်အသစ်၏ဒီဇိုင်းနှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်၏နောက်တစ်ခုရောက်ရှိလာလိမ့်မည် နှင့်အတူအချို့သောတူညီဝေမျှပေးသည် Google Pixel 2၎င်းတွင်ပါ ၀ င်မည့်နှစ်ဆကင်မရာစနစ် မှလွဲ၍ ။ အပေါ် Read!
ဒီအလယ်အလတ်အကွာအဝေး၏ဒီဇိုင်းသည်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုကိုဖော်ပြသည်။ HTC သည်၎င်းသည်အမြဲတမ်းနည်းနည်းနောက်လိုက်သွားသောလိုင်းကိုစွန့်ပစ်လိုက်သည်။ U12 Life သည်အထက်ဖော်ပြပါ Google မိုဘိုင်းနှင့်ဆင်တူမှုကြောင့်အထက်ဘက်ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိဒေါင်လိုက်သက်ဝင်ကာတွန်းနှစ်ဆကင်မရာ၊ လက်ဗွေဖတ်နိုင်သည့်ထောင့်ဖြတ်နှင့်အထက်ဘက်ခြမ်းရှိအလျားလိုက်မျဉ်းကြောင်းတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဤအချက်ကိုထောက်ပြသည်။ အလယ်အလတ်မှာထိုင်ဝမ်မှပြုပြင်ထားသောအမေရိကန်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ၏အတွေးအခေါ်များသာဖြစ်သည်။
ဒီ terminal ၏ rendering နှင့်အတူကံမကောင်းစွာအခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်အင်္ဂါရပ်များထုတ်ဖော်မခံခဲ့ရပါ။ ယခင်ပေါက်ကြားခဲ့သည့်အချက်အလက်များအရ ၂.၆၀ x ၁,၀၈၀ ပစ်ဇယ် ၆ လက်မ FullHD + မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်။ (၁၈: ၉) Snapdragon6SoC၊ 2.160GB RAM၊ ၃၆၀၀ mAh စွမ်းရည်ရှိသည့်ဘက်ထရီနှင့် 1.080 + 18MP ကင်မရာနှစ်လုံးတပ်ဆင်ထားပြီးအရှေ့ဘက်တွင် ၁၃ Megapixel Sensor တပ်ဆင်ထားသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း terminal သည် Bluetooth 9, Dual SIM နှင့် NFC အထောက်အပံ့များပါရှိသည်။
ဒီဂျစ်တယ်ပုံရိပ်နှင့်ယိုစိမ့်သောနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ထံတင်ပြချိန်တွင်ထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူကအတည်ပြုရမည်။ ကောလာဟလများနှင့်ယိုစိမ့်မှုအမျိုးအစားထဲမှာ grated.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » NOTICIAS » နောက်ထပ်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သော HTC U12 Life ၏ rendering ကိုစစ်ထုတ်သည်